Tartanka Orodada Olimbikada Aduunka oo maanta bilaabanaya iyo Orodyahanada Soomaaliya oo ordaya | Somaale.com
Tartanka Orodada Olimbikada Aduunka oo maanta bilaabanaya iyo Orodyahanada Soomaaliya oo ordaya
Waxaa lagu wadaa in maanta Garoonka cusub ee Olympic Stadium lagu daah furo Tartanka Orodada ee Olympikada Aduunka, kadib markii todobaadkii hore la furay, iyadoo ay ordayaan ilaa ciyaartoy fara badan.
Tartanka maanta waxaa ka qeyb galaya Orodyahanada Soomaaliya u matalaya ciyaaraha Olympikada Aduunka ee lagu kala magacaabo Zamzam Maxamed Faarax iyo Maxamed Xasan, kuwaasoo maalmahan ku guda jiray diyaar garow ballaaran.
Zamzam Maxamed Faarax ayaa ordeyda 400-Mitir gelinka hore ee London, marka ay saacada geeska Afrika ay tahay 2-da duhurnimo ama Sideed saac, waxaana Soomaali badan ay rajo ka qabaan inay guul soo hoyn doonto.
Sidoo kale Maxamed Xasan ayaa isna ordi doona galabta, hase ahaatee waxaa la ordi doono Orodyahano u kala dhashay Itoobiya iyo Kenya, kuwaasoo aad looga cabsi qabo in tartanka ay guulo ka keenaan.
Soomaali badan oo ku nool magaalada London ayaa rajo wanaagsan ka qaba inay guul soo hoyaan Zamzam iyo Maxamed, iyagoo ku soo dhoweeyay magaalada, dar daarana u wada jeediyay.
Waxaa hadaba isha lagu hayaa sida Labada ciyaartoy ee Soomaali matalaysa ay guulo u soo hoyaan, waxaana rajada tahay mid taagan,
Wasiirka dastuurka: C/raxmaan Xoosh Jibriil "Shakigii ku jiray qodobo ka mid ah dastuurka Waa la dhameeyay" 0
Kuma'Ayuu Ahaa Raii'salwasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdirisaaq Xaaji Xuseen
Maxaad kala Socotaa Xaalada Caafmaad Ee Fanaanada Saado Cali Warsame 0